काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पोल्याण्ड ५ दिने भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएकी छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिको २४ औँ सम्मेलन कोपा–२४ मा सहभागी हुन शनिबार पोल्याण्ड गएकी राष्ट्रपति आज (बिहीबार) स्वदेश फर्केकी हुन् । राष्ट्रपतिलाई स्वागत गर्न उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर
निर्मलाका हत्यारा खोज भन्दै टर्च जुलुस
कञ्चनपुर । निर्मालाको हत्याको विरोधमा कञ्चनपुरमा फेरि आन्दोलन सुरु भएको छ । नागरिक संघर्ष समितिले बुधबार जिल्ला प्रशासनमा धर्ना दिँदै न्याय हराएको भन्दै टर्च जुलुस प्रदर्शन गरिएको छ । भीमदत्त– २ उल्टाखामकी १३ वर्षिया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको चार महिना बित्न लागेको छ । हत्यारा
नेप्से २३ अंकले घट्यो
काठमाडौं । बुधबार शेयर बजार २२.८० अंकले घटेको छ। अनलाइन प्रणाली लागू भएपछि बजार सुध्रिने अपेक्षा गरेका लगानीकर्ता दैनिक दोहरो अंकले बजार घटेपछि तनावमा छन् । कुनै नीतिगत फेरवदल बिना भारी शेयर गिरावट भइरहेको छ । पछिल्ल्लो समय बैंकहरूले निक्षेपमा ब्याज बढाउन थालेपछि बजार ओरालो लागेको एक थरी लगानीकर्ताहरूको
‘सरकार धार्मिक द्वन्द्वको नाईके हुन थाल्यो’: मीन विश्वकर्मा
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्वमन्त्री मीन विश्वकर्माले एशिया प्यासिफिक समिट आयोजनामा सरकारको संलग्नता हुनु गम्भीर आपत्तिको विषय भएको बताएका छन् । धार्मिक आईएनजिओले गरेको कार्यक्रममा सरकार सहभागी हुनु बिडम्बना भएको भन्दै क्रिश्चियनभित्रै विवादित संस्थालाई सरकारले
एउटा चर्चको बजारीकरण गर्न सरकार नै लाग्नु आपत्तिजनक
काठमाडौं । एकीकृत राप्रपा (राष्ट्रवादी) का अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले युनिफिकेसन चर्चको बजारीकरणमा सरकार लागेको भन्दै आपत्ति जनाए । आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेका कार्यक्रममा डा. लोहनीले काठमाडौंमा आज सम्पन्न हुने ‘एशिया प्यासिफिक समिट–२०१८’ को कार्डमा नेपाल सरकारको लोगो रहेको
काठमाडौं । नेपाल–भारत प्रवुद्ध समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन भारत सरकारले अस्वीरकार गर्ने संकेत गरेको छ । प्रतिवेदन भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई बुझाउने तयारी भइरहेका बेला सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टीका प्रभावशाली नेता एवम् नेपाल मामिलाका जानकार विजय जोलीले रिपोर्ट सार्थक नभएकोले भारतले
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नेपालको औपचारिक भ्रमणमा रहेएकी म्यान्मारका स्टेट काउन्सिलर आङ सान सु कीले शुक्रबार यहाँ भेटवार्ता गरेकी छन् । सो अवसरमा उनिहरूका बीचमा द्विपक्षीय हित र आपसी सम्बन्धका विविध विषयमा कुराकानी भएको जनाइएको छ । भेटमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, प्रधानमन्त्री
सु की र हुन सेन काठमाडौंमा
काठमाडौं । एशिया प्रशान्त शिखर सम्मेलनमा भाग लिने सिलसिलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निमन्त्रणामा नेपालको औपचारिक भ्रमणका लागि म्यान्माका स्टेट काउन्सिलर आङ सान सु की बिहीवार बिहान काठमाडौं आइपुगेकी छिन् । नेत्री सु कीलाई उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय
काठमाडौं । नागरिक समाजका अगुवा डा. सुन्दरमणि दीक्षितले सरकारले मंगलबारबाट लागू गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सैद्धान्तिक रुपमा ठीक भएपनि यसको दीर्घकालीन नतिजा डरलाग्दोे हुने औंल्याएका छन् । बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा डा. दीक्षितले भने,‘यो कार्यक्रम लागू गर्नको लागि
पेट्रोलियम पाइपलाइन तीन महीनाभित्र सञ्चालनमा आउने
काठमाडौं । नेपाल–भारत पेट्रोलियम पाइपलाइन आगामी तीन महीनाभित्र सञ्चालनमा आउने परियोजनाले दाबी गरेको छ । मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना कार्यालय सिमराका अनुुसार नेपालतर्फको ३९.२ किलोमिटर भू–भागमध्ये २१ किलोमिटर क्षेत्रमा पाइप बिछ्याउने काम सम्पन्न भइसकेको छ । बढीमा तीन
काठमाडौं । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले पेट्रोलियम पदार्थमा ठगी गर्ने १२ ओटा पेट्रोलपम्पलाई कारवाही गरेको छ । विभागले पछिल्लो एक महीनाको अवधिमा सफ्टवयर प्रविधिको प्रयोग गरी दुईदेखि पाँच प्रतिशतसम्म पेट्रोलियम पदार्थमा ठगी गर्ने १२ पेट्रोलपम्पलाई कारवाही गरेको हो । कारवाही पर्नेमा विजय आयल
महिला हिंसा शून्यमा झार्ने नीति लिएका छौं : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानका सन्दर्भमा शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आज जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा नेपालले महिला हकअधिकारको संरक्षणमा ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको उल्लेख गर्दै सरकारले महिलाविरुद्ध हुने सबै किसिमका हिंसाप्रति
प्रदेशसभा स्वतन्त्र पूर्वउम्मेदवार राजाबाबुको गोली हानी हत्या
जितपुर, कपिलवस्तु। गत वर्ष सम्पन्न प्रदेशभाको निर्वाचनमा कपिलवस्तु निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ को (ख) बाट प्रदेशसभा सदस्यको स्वतन्त्र उम्मेदवार रहेका ३० वर्षीय दीपेन्द्रकुमार चौधरी (राजाबाबु) को गोली प्रहार गरी हत्या गरिएको छ। जिल्लाको शुद्धोधन गाउँपालिका–४ मोतीभारीस्थित घर नजिकैको सडकमा अज्ञात समूहले
भीम रावलको प्रश्न सत्यनिरुपण आयोगले किन काम गर्न सकेन ?
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य एवम् पूर्व उपप्रधानमन्त्री भीम रावलले सत्यनिरुपण तथा व्यक्ति बेपत्ता छानबिन आयोगले काम सम्पन्न नगरेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले भने,‘दुई वर्षभित्र
चुनावी घोषणा पूरा गर्न नसकेपनि जन अपेक्षाअनुसार काम गर्दै छुः चिरीबाबु
काठमाडौं, ३ मंसिर । ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले महर्जनले स्थानीय तहको कानून, कर्मचारी समायोजन लगायतका विषयहरुले गर्दा चुनावी घोषणा अनुसारको काम गर्न नसकेको बताएका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले सोमबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मेयर महर्जनले चुनावी वाचा पूरा नभएपनि जनताको
प्रकाश अवसानको सामना सजिलो थिएनःप्रचण्ड
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष प्रचण्डले छोरा प्रकाशको अवसानको सामना गर्नु आफ्ना निम्ति सजिलो नभएको स्मरण गरेका छन् । तर, आफूलाई शोकलाई शक्तिमा बदल्न सबैको माया, सद्भाव, प्रेम र हौसला प्राप्त भएको उनले बताए। प्रकाशको पहिलो स्मृति दिवसका अवसरमा सोमबार आफ्नै निवास खुमलटारमा आयोजित
नेकपाकै नेताबाट सरकारको आलोचना
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य एवम् पूर्वमन्त्री अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकारको कामकारबाही सन्तोषजनक नभएको बताएका छन् । सरकारले निन्तरतामा क्रमभंगता गर्न नसकेको भन्दै यो सरकार निरन्तरताको लागिमात्र नभएको टिप्पणी गरेका छन् । आइतबार रिपोटर्स क्लबले आयोजना
ईपीजीको प्रतिवेदन छिट्टै मोदी समक्षः डा. भट्टराई
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले नेपाल–भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले तयार पारेको संयुक्त प्रतिवेदन छिट्टै भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइने बताएका छन् । ‘प्रतिवेदन बुझाउन भारतीय संयोजकले प्रधानमन्त्री मोदीसँग समय माग्नु भएको छ,छिट्टै प्रतिवेदन
म्याग्दी- नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–९ मा अवस्थित प्रसिद्ध धार्मिकस्थल गलेश्वर शिवालयको दर्शन गरेका छन् । उनको साथमा दर्शनका लागि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा पनि पुगेका थिए । प्रचण्डले मन्दिरमा आरती समेत गरेका छन् । सो अवसरमा प्रचण्ड
प्रधानमन्त्रीको विदेश मामिला सल्लाहकारमा नेकपा नेता भट्टराई नियुक्त
काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विदेश मामिला सल्लाहकारमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता राजन भट्टराई नियुक्त भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीको विदेश मामिला सल्लाहकार नियुक्त गरेको हो । भट्टराई नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । व्यवसायका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिन पाइने भएको छ। राष्ट्र बैंकले एक सूचना जारी गर्दै शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितोमा राखी ऋण लिएर व्यवसाय गर्न योग्य नागरिकलाई ऋण लिन आग्रह गरेको हो। आव २०७५/७६ को बजेटमै ‘शैक्षिक युवा स्वरोजगार’, ‘विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना’,
सिंहदरबार निर्माणको काम १८ महिनामा सक्ने
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सहसचिव राजुमान मानन्धरले अबको १८ महिनाभित्र सिंहदरबारको प्रवलीकरणको काम सम्पन्न हुने बताएका छन् । उनले भने,‘सिंहदरबार अब भत्काउनु पर्दैन् । प्रवलीकरण गर्ने हो ।’ छिट्टै टेण्डर गरेर प्रवलीकरणको काम अघि वढछ,‘उनले भने,‘ ढिलोमा १८ महिनामा काम सम्पन्न
मानवअधिकारवादी नेता पद्मरत्न तुलाधरको ७८ वर्षको उमेरमा निधन
काठमाडौं । मानवअधिकारवादी नेता पद्मरत्न तुलाधरको ७८ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । राजधानीको नर्भिक अस्पतालमा उपचाररत उनको आइतबार निधन भएको हो । गत शुक्रबार साँझ माइतीघरस्थित अन्नपूर्ण न्यूरो अस्पतालमा भर्ना गरिएका मस्तिष्कघात भएको थियो । त्यहाँबाट उनलाई नर्भिक अस्पतालमा रिफर गरिएको थियो । मानवअधिकार
३ नं प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि सिआईएको एजेन्ट भएको स्थापितको आरोप
काठमाडौं । प्रदेश नं ३ का मुख्य मन्त्री डोरमाणि पौडेल अमेरिकी जासुसी संस्था (सीआईए) का लागि काम गर्ने गरेको आरोप लागेको छ । शुक्रबार बर्खास्तीमा परेका प्रदेश नं ३ का भौतिक योजना तथा विकास मन्त्री केशव स्थापितले शुक्रबार हिमालयन टेलिभिजनका संवाददाता सुमन शर्मासँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री पौडेलललाई यस्तो
जनप्रतिनिधि विकासमा जुटेका छन,जनताको साथ चाहिएको छःमेयर शाक्य
काठमाडौं । जनप्रतिनिधि आएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाको विकासले गति लिएको महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले बताएका छन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएको १७ महिना अवधिमा थुप्रै विकास निर्माणका काम सम्पन्न भएको उनको भनाइ छ । क्षेत्राधिकार बाहिरका केही परियोजना कारण महानगरपालिका आलोचित भएको भन्दै
‘भिजनदार’ भनिएका प्रदेश ३ नं का मन्त्री केशव स्थापित ६ महिनामै पदमुक्त
काठमाडौं । ‘भिजनदार’ भनिएका प्रदेश ३ का भौतिक योजना मन्त्री केशव स्थापित ६ महिना नपुग्दै पदमुक्त भएका छन् । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललेसँगको खटपटपछि उनलाई शुक्रबार पदबाट बर्खास्त गरिएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले बताएको छ । मन्त्री स्थापितलाई संविधानको धारा १६९ को उपधारा २ (ख) बमोजिम पदबाट बर्खास्त
कर्णालीका जनप्रतिनिधिको सेवा—सुविधाका लागि वार्षिक ४५ करोड खर्च लाग्ने
प्रदेश सरकारका पदाधिकारी तथा सांसदहरूको तलब तथा सेवा–सुविधाका लागि वार्षिक २ करोड २३ लाख ६६ हजार र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि रू. ४२ करोड ९० लाख ६८ हजार गरी कूल रू. ४५ करोड १४ लाख ३४ हजार खर्च लाग्ने । दीपेन्द्र शर्मा/सुर्खेत सरकार गठन भएको ९ महिनापछि कर्णालीका मुख्यमन्त्री, मन्त्री,पदाधिकारी तथा
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आज स्वदेश फकर्ने
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बिहीबार स्वदेश फर्किदै हुनुहुन्छ । राष्ट्रपति भण्डारी आज बेलुका ७ः४० बजे काठमाडौं ओर्लिने कार्यक्रम रहेको छ । भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले कतारका अमिर शेख तमिम बीन हमाद अल थानीसँग भेटवार्ता गर्नुका साथै त्यहाँ आयोजित विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुनु
डेढ लाख बराबरका पटाका बरामद, प्रहरीले आज नष्ट गर्दै
कात्तिक १४, लहान । प्रहरी टोलीले मङ्गलवार राति सिरहाका विभिन्न स्थानबाट करीब रू. १ लाख ५० हजार मूल्य बराबरको विष्फोटक पदार्थ पटाका बरामद गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले अवैधरूपमा भारतबाट ल्याउँदै गरेको अवस्थामा पटका, फूलझरी, बुलेट बम, चक्कर हाइड्रो फोइल्स, रविन्स बुलेटलगायतका
प्रधानमन्त्री ओलीको स्वस्थ्य अवस्था सुधारोन्मुख
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य सामान्य रहेको त्रिवि शिक्षण अस्पताल अन्र्तगतको मनमोहन कार्डियो सेन्टरले बताएको छ । छातीमा संक्रमण देखिएपछि सोमबार बिहान ४.३० बजे अस्पताल भर्ना भएका प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थबारे अस्पतालले पत्रकार सम्मेलन गरेर अवस्था सामान्य रहको जानकारी